China Thermal transmission system izicelo impahla ifektri abakhiqizi | Yongjie
Ingxubevange Main: 3003/3004/3005/6060/4343/4045/4004/4104
Isicelo: Isipholisanjini, i-condenser, i-evaporator, i-oyela-epholile, i-heater, isitshalo sokuhlukanisa
Izici zomkhiqizo: isisindo esincane, ukumelana nokugqwala okuqinile, ukusebenza kahle kwe-brazing, ukuqhuba okuphezulu kokushisa, ukucubungula okulula, okungenaphunga, ukumelana nokugqwala okuqinile, njll.
Isetshenziswa kakhulu ekushintshisaneni ngokushisa kwezimoto nemishini yobunjiniyela, i-air conditioning yomphakathi neyokuhweba, ukupholisa isiteshi samandla, ukupholisa umoya, izinto zezinyosi kanye ne-aluminium alloy casings casings.
Njengokuphishekela okuqhubekayo kwe-miniaturization yezimoto ezishisa ukushisa, ukuthembeka okuphezulu, ukuqhuba okuphezulu kokushisa, impilo ende nezindleko eziphansi izingqikithi zaphakade;
Ngaphezu kokuthuthuka komklamo wesakhiwo sokushisa, umshini wokushisa osebenza kahle ngeke uphelele ngaphandle kwento enamandla amakhulu nokumelana nokugqwala okukhulu futhi kungancishiswa njengesisekelo;
Ngenxa yobuningi benqubo yokubamba ama-alloys we-brazing aluminium, ubudlelwano phakathi kwezakhiwo ezahlukahlukene kumele bulinganiselwe lapho kwenziwa izinto ezintsha nezinqubo ezintsha ukuhlangabezana nezidingo zokusebenza okuphelele kwesishintshisi sokushisa;
Ukuthuthukiswa nokusetshenziswa kwezinto ezintsha nobuchwepheshe kuzonikela kakhulu ekuthuthukiseni izishintshisi zokushisa ze-aluminium.
Ama-alloys wendabuko we-AA3003 noma we-AA3005 awasakwazi ukuhlangabezana nokushintshana kokushisa okuphezulu
- Umbani oqhubekayo;
- High nokumelana nokuphila isikhathi eside;
-High lokushisa ukumelana.
Ukwandisa ukusebenza kwe-aluminium alloy:
- Amandla aphakeme ngemuva kokubopha;
- Better ukugqwala ukumelana;
- Amandla okukhathala kwempahla yepayipi (impahla yepayipi);
- Ukuzinza okungcono;
- I-fin inokusebenza okungcono kokulwa nokuwa;
- Amaphiko ane-conductivity ephezulu yokushisa (amaphiko);
- Okwe-intercooler, kufanele kube nokumelana nokushisa okuphezulu;
- Ingxubevange ingasetshenziswa kabusha.
Langaphambilini Ifilimu le-Aluminium Plastic
Olandelayo: Izinto ezintsha ze-Energy Energy
I-Aluminium Coil Yokuvimbela Ukushisa